आज ह्वात्तै बढ्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कती? – Ap Nepal
February 27, 2021 1483
Prevबैंकमा पैसा छ ? त्यसो भए यो हे;र्नुहोस, खातामा राखेको ४ लाख म:ध्येरातमा यसरी कसले झि;क्यो ? (भिडियो सहित)
Nextआखिर कस्को हो “सिधा कुरा” ? रबि लामीछानेको कि क्यापिटल मिडि,याको ?
कुनैबेला बलिउडमा एकछत्र राज गरेकी काजोल देवगनका बाल्य’ कालका तस्विर सामाजिक संजालमा भा इरल हेर्नुहोस